Vaovao - Tabilaon'ny milina famaranana
Famintinana tena ilaina:
Ho an'ny fanapahana haingana sy ny henjana lehibe indrindra, ampiasao ny famaranana fohy kokoa misy savaivony lehibe kokoa
Ny milina famaranana helix miovaova dia mampihena ny resadresaka sy ny hovitrovitra
Mampiasà kobalt, PM / Plus ary karbida amin'ny fitaovana sarotra sy fampiharana avo lenta
Ampiharo palitao ho an'ny famahanana, haingam-pandeha ary fiainana avo lenta kokoa
Kavina famaranana dia ampiasaina amin'ny fampiharana fikosoham-bary amin'ny ankapobeny, ao anatin'izany ny fametahana, ny fametahana ary ny fanapahana azy.
Fantsona famaranana Keyway novolavolaina amina savaivony fanapahana zana-kazo mba hamokarana mifamatotra eo anelanelan'ny lohan-dàlana notapahin'izy ireo sy ny kitendry hazo na famaky.
Kitapo famaranana baolina, fantatra ihany koa amin'ny hoe milling end ball, dia ampiasaina amin'ny fikosoham-bary, ny fametahana ary ny paosy. Ny milina famaranana baolina dia namboarina tamin'ny sisin'ny fanapahana boribory ary ampiasaina amin'ny famolavolana ny maty sy ny bobongolo.
Fikosoham-bary farany, fantatra koa amin'ny hoe mills hog, dia ampiasaina hanala haingana ireo fitaovana be dia be mandritra ny fandidiana mavesatra kokoa. Ny famolavolana nify dia mamela tsy hisy hovitrovitra kely fa mamela famaranana mafy kokoa.
Kodiarana farany amin'ny familiana manana sisin'ny fanapahana boribory ary ampiasaina raha ilaina ny haben'ny radius manokana. Ny famaranana ny chamfer farany dia manana sisiny manapaka ary ampiasaina amin'ny toerana izay tsy takiana haben'ny radius manokana. Ireo karazany roa ireo dia manome fiainana fiainana lava kokoa noho ny milina famaranana.
Fikosehana farany sy famaranana dia ampiasaina amin'ny fampiharana milina isan-karazany. Izy ireo dia manala ireo fitaovana mavesatra ary manome famaranana malama amin'ny tsipika tokana.
Kodiarana farany boribory dia ampiasaina amin'ny fikosoham-bary boribory faribolana. Manana torohevitra momba ny fanapahana tany izy ireo izay manamafy ny faran'ny fitaovana ary mampihena ny sisin-tsolika.
Vary familiana dia fitaovana multifunctional ampiasaina amin'ny fitsangatsanganana, fandavahana, fanisan-jery isan-karazany, fitsangatsanganana ary asa isan-karazany.
Vary farany tapered dia noforonina tamin'ny sisiny fanapahana izay taper amin'ny farany. Izy ireo dia ampiasaina amin'ny fampiharana maty sy bobongolo maromaro.
Ny flauta dia manasaka riaka na lohasaha izay voadidy ao amin'ny vatan'ilay fitaovana. Ny flute maro be kokoa dia mampitombo ny tanjaky ny fitaovana ary mampihena ny habakabaka na ny fikorianan'ny puce. Ny famaranana fikosoham-bary tsy dia misy fantsom-piaramanidina kely amin'ny sisiny fanapahana dia hanana habaka puce kokoa, raha toa kosa ny milina famaranana misy sodina betsaka dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana fanapahana sarotra kokoa.
Sodina tokana ny volavola dia ampiasaina amin'ny milina haingam-pandeha sy fanesorana fitaovana avo lenta.
Sodina efatra / marobe Ny famolavolana dia mamela ny tahan'ny famahanana haingana kokoa, fa noho ny fihenan'ny sehatry ny sodina, mety hanahirana ny fanesorana ny puce. Mamokatra famaranana tsara lavitra kokoa noho ny fitaovana sodina roa sy telo izy ireo. Mety ho an'ny peripheral sy famaranana fikosohana.
Sodina roa ny endrika amam-bika no manana habaka betsaka indrindra amin'ny flauta. Izy ireo dia mamela ny fahafaha-mitondra chip bebe kokoa ary ampiasaina indrindra amin'ny fametahana sy ny paosy fitaovana tsyferrous.
Sodina telo ny endriny dia manana habaka sodina mitovy amin'ny sodina roa, nefa koa manana fizarana miampita lehibe kokoa hahazoana tanjaka lehibe kokoa. Ampiasaina amin'ny pocketing sy slotting ferrous ary fitaovana nonferrous izy ireo.
Fitaovana fanapahana fitaovana:
Steel haingam-pandeha (HSS) manome fanoherana tsara anaovan'akanjo ary ny vidiny dia kely noho ny milina famaranana kobalta na karbida. HSS dia ampiasaina amin'ny fikolokoloana tanjona ankapobeny ho an'ny fitaovana ferrous sy nonferrous.
Steel haingam-pandeha haavo (HSSE) vita amin'ny vy haingam-pandeha, karbaona, karbida vanadium ary firaka hafa natao hampitomboana ny fanoherana mahery vaika sy henjana. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny fampiharana ankapobeny amin'ny vy vy sy ny alimo silikone avo.
Cobalt (M-42: 8% Cobalt): Manome fanoherana akanjo tsara kokoa, hamafin'ny hafanana ambony sy henjana kokoa noho ny vy haingam-pandeha (HSS). Tena kely dia kely ny chipping na microchipping ao anatin'ny fepetra fanapahana mafy, mamela ny fitaovana hihazakazaka 10% haingana kokoa noho ny HSS, ka miteraka taham-panalana vy tena tsara sy famaranana tsara. Izy io dia fitaovana lafo vidy tsara indrindra ho an'ny milina vy, vy ary firaka titanium.
Powdered Metal (PM) mafy kokoa sy mahomby kokoa noho ny karbaôida mahery. Izy io dia henjana kokoa ary tsy dia mora vaky. Ny PM dia mahavita tsara amin'ny fitaovana <30RC ary ampiasaina amin'ny fampiharana avo lenta sy avo lenta toy ny fikororohana.
Carbide matevina manome henjana kokoa noho ny vy haingam-pandeha (HSS). Tena mahatohitra hafanana izy ary ampiasaina amin'ny fampiharana haingam-pandeha amin'ny vy, fitaovana tsy ilaina, plastika ary fitaovana matevina hafa. Ny fikosoham-baravarankely Carbide dia manome henjana tsara kokoa ary afaka mihazakazaka 2-3X haingana kokoa noho ny HSS. Na izany aza, ny tahan'ny sakafo mavesatra dia mety kokoa amin'ny fitaovana HSS sy kobalta.
Carbide-Tips brazed hatrany amin'ny fanapahana ny vatan'ny fitaovana vy. Nanapaka haingana kokoa noho ny vy hafainganam-pandeha izy ireo ary matetika ampiasaina amin'ny fitaovana ferrous sy nonferrous ao anatin'izany ny vy vy, vy ary vy vy. Fitaovana karbaona karbaona no safidy mahomby amin'ny fitaovana savaivony lehibe kokoa.
Diamondra polycrystalline (PCD) dia diamondra sentetika mahazaka-mahatohitra sy mitafy izay mamela ny fanapahana haingam-pandeha amin'ny akora tsy plastika, plastika ary alloys tena sarotra alefa amin'ny milina.
Coatings / famaranana mahazatra:
Titanium Nitride (TiN) dia mandrakotra tanjona ankapobeny izay manome lubricity avo ary mampitombo ny fikorianan'ny chip amin'ny fitaovana malefaka kokoa. Ny fanoherana ny hafanana sy ny hamafisana dia mamela ny fitaovana mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha avo 25% ka hatramin'ny 30% amin'ny hafainganam-pandehan'ny milina vs. fitaovana tsy voaravaka.
Titanium Carbonitride (TiCN) mafy kokoa sy mahatohitra akanjo kokoa noho ny Titanium Nitride (TiN). Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny vy tsy misy fangarony, vy vy ary firaka aliminioma. TiCN dia afaka manome ny fahafaha-mihazakazaka fampiharana amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta kokoa. Mampiasà fitandremana amin'ireo fitaovana tsy misy fotony noho ny fironana mahamay. Mitaky fitomboana 75-100% amin'ny hafainganam-pandehan'ny milina vs. fitaovana tsy misy akanjo.
Titanium Aluminium Nitride (TiAlN) manana hafanana avo kokoa sy hafanan'ny oksiasiôna mifanohitra amin'ny Titanium Nitride (TiN) sy Titanium Carbonitride (TiCN). Mety amin'ny vy tsy misy fangarony, vy vy firaka avo, alika hafanana miorina amin'ny nickel ary firaka titanium. Mampiasà fitandremana amin'ny fitaovana tsy misy fotony satria mirona any anaty afero. Mitaky fiakarana 75% ka hatramin'ny 100% amin'ny hafainganam-pandehan'ny milina vs. fitaovana tsy misy akanjo.
Aluminium Titanium Nitride (AlTiN) dia iray amin'nireo coatings mahazaka fanoherana sy mafy indrindra. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny fiaramanidina milina sy fitaovana aerospace, firaka nickel, vy vy, titanium, vy vy ary vy vy.
Zirconium Nitride (ZrN) dia mitovy amin'ny Titanium Nitride (TiN), fa manana hafanana oksiasiôna avo kokoa ary manohitra ny fametahana ary manakana ny fananganana sisiny. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny fitaovana tsy misy fotony, anisan'izany ny alimo, varahina, varahina ary titanium.
Fitaovana tsy misy akanjo Aza asiana fitsaboana manohana amin'ny sisin'ny fanapahana. Izy ireo dia ampiasaina amin'ny hafainganam-pandeha mihena ho an'ny fampiharana ankapobeny amin'ny metaly nonferrous.
Fotoana fandefasana: Nov-26-2020